नेइमारले भने- मैले विश्वकपमा नाटक गरेकै हो, अब दोहोरिन्न ! – Everest Dainik – News from Nepal
नेइमारले भने- मैले विश्वकपमा नाटक गरेकै हो, अब दोहोरिन्न !
एजेन्सी, साउन १५ । रसियामा हालै सम्पन्न विश्वकप फुटबलमा ब्राजिलका स्टार नेइमारले अनावश्यक नाटक देखाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । अहिले उक्त आलोचना मत्थर भएको छ । तथापि फेरि चर्चामा आउने देखिएको छ ।
खेलको समयमा नेइमारले गरेको नाटक स्वयम् अहिले उनले नै स्वीकार गरेपछि चर्चाको विषय हुन सक्ने भएको हो । नेइमारले आफूले गल्ति गरेको भन्दै पहिलो पटक उनले स्वीकार गरेका छन् ।
उनले आफ्नो प्रायोजकको विज्ञापनको सहायता लिँदै विश्वकपमा आफूले गरेको केही व्यवहार बनावटी रहेको बताएका हुन् । आइतबारबाट ब्राजिलका अधिकांश टेलिभिजन च्यानलहरूमा प्रसारित सो विज्ञापनमा नेमारले आगामी प्रतियोगितामा त्यस्तो व्यवहार नहुनेसमेत बताएका छन् ।
टोलीका महत्वपूर्ण सदस्यसमेत रहेका नेमारले रुस विश्वकपमा ब्राजिलका लागि दुई गोलसमेत गरेका थिए । यद्यपि उनको टोली बेल्जियमसँग पराजित हुँदै क्वार्टरफाइनल चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।
खेलमा विपक्षी खेलाडीसँग सामान्य रूपमा ठोक्किँदासमेत फ्रिकिक र पेनाल्टी अवसरका लागि अनावश्यक रूपमा लडेर नाटक गरेका उनको समर्थकहरूबाटै तीव्र आलोचना भएको थियो । नेमारको सोही व्यवहारपछि उनलाई व्यंग्य गर्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कार्टुन र भिडियोसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।
ट्याग्स: Footbller Neymar, Neymar